‘सबैले आफ्नो मताधिकार सुरक्षित गर्नुहोस्’ – Sajha Bisaunee
‘सबैले आफ्नो मताधिकार सुरक्षित गर्नुहोस्’
सुनिता थापा / जिल्ला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन कार्यालय सुर्खेत
निर्वाचन आयोगले पुनः फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक गर्ने कार्य सञ्चालन गर्दैछ । सुर्खेतमा पनि आगामी यही पुस १७ देखि एक महिनासम्म नामावली संकलन र अद्यावधिकको कार्य गरिँदैछ । यसका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सुर्खेतले जिल्लास्तरीय सरोकारवालाहरूसँग छलफल समेत गरिसकेको छ । कार्यालयले तयारी पनि अन्तिम चरणमा पुगिसकेको जनाएको छ । यसै सन्दर्भमा रहेर सहकर्मी गीता थापाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सुर्खेतका जिल्ला निर्वाचन अधिकारी सुनिता थापासँग गरेको कुराकानी :
फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलनको प्रकृया के हुँदैछ ?
 निवार्चन आयोग नेपालले मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक कार्यक्रम (दावी विरोध समेत) २०७३ स्वीकृत भइसकेको
छ । सुर्खेत जिल्लामा पनि यसको प्रक्रिया हामीले यही पुसको महिनादेखि सुरु गर्दैछौं । त्यसका लागि कसरी काम गर्ने भनेर राजनीतिक दल र सरोकारवाला निकायसँगको छलफल पनि ग¥र्यौं । सबैको सल्लाह अनुसार अब काम सुरु हुन्छ ।
काम कहिलेदेखि सुरु हुँदैछ ?
 मतदाता नामावली संकलन यही पुस १७ गतेदेखि माघ १७ गतेसम्म सञ्चालन गर्न लागेको छौं । यसमा हामीले नयाँ तथा पहिला नामावली दिइसकेका तर, त्रुटी भएका र सच्याउनु पर्ने, बसाइँ–सराइँ, मृत्यु भएकाहरूको पनि अद्यावधिक गराउने गर्छौ । अर्काे भने दाबी विरोध भनेको कसैले कसैको नाममा यो व्यक्ति यहाँको होइन भनेर प्रमाणसहित नामावली हटाउनको लागि गरेको दाबी हो । यसैमा हामीले काम गर्दैछौं ।
जिल्लाभरी नै कार्यक्रम लागू हुने हो ?
 यसमा हामीले सुर्खेत जिल्लाका सबै गाविस तथा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाहरूमा नामावली संकलन गर्छौं । गाविसस्तरमा गाविस सचिवले एक दिन अगाडि नै २०७३ असोज मसान्तसम्ममा संकलन भएका नामावलीहरू प्रकाशन गर्ने र त्यसको ४ दिनसम्म त्यसै नामावलीमा आफ्नो नाम, ठेगाना, बसाइँ–सराइँ, मृत्यु तथा कसैले दावी विरोध गर्न सक्नेछन् । सामाजिक परिचालकले पनि हामीलाई सहयोग गर्नु हुनेछ । र हामीले दर्ता कर्मचारी पठाउँछौं र नामावली संकलन गर्ने गर्छाै ।
फोटोसहितको मतदाता नामावली दर्ता गर्न धेरै छुटेको बताइन्छ । यसप्रति किन रुची नभएको होला ?
 मतदाता नामावलीप्रति रुची नभएको होइन, कसैले थाहा नपाएर कोही देशभन्दा बाहिर भएकाले पनि रुची नभएको जस्तो देखिएको मात्र हो । पहुँच र सूचना पुगेको क्षेत्रहरूमा सबै जना मतदाता नामावली दर्ता गराउन आउनुभएको छ । त्यही हो दुगर्म भेगका व्यक्तिहरू दर्ता स्थल भएको ठाउँसम्म आउन नसक्नु र सूचना समयमा नपाउँदा रुची नभएको जस्तो देखिएको मात्र हो ।
हालसम्म नामावली संकलन कति भएको छ ?
 २०७३ असोज मसान्तसम्ममा महिला ९२ हजार आठ सय ६६ जना, पुरुष ८६ हजार पाँच सय ४७ जना र तेस्रो लिङ्गि एक जना गरी जम्मा एक लाख ७९ हजार चार सय १४ जनाको मतादाता नामावली संकलन भएको छ । यसमा त्रुटिहरू सच्याउनुपर्ने तथा दाबी विरोधको लागि पुन नामावली संकलन गर्न लागिएको हो ।
पुरुषको भन्दा महिलाको संख्या बढी देखियो नि के कारणले हो ?
 अब यसमा पुरुष भन्दा महिलाको संख्या धेरै देखिनुको कारण भनेको पुरुषहरू कमाउनको लागि धेरै जसो बाहिर जानु नै हो । घर खर्च चलाउनको लागि पुरुष भारत लगायत अन्य मुलुकमा जाने र महिला घरमा बस्ने भएकाले पनि महिलाको संंख्या धेरै देखिन आएको हो । पुरुषहरू कमाउन भारत तथा अन्य मुलुकमा गएको अवस्थामा नामावली संकलन भएका कारण पनि महिलाको संंख्या धेरै देखिएको हो ।
सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरमा नै मतदाता नामावलीको संख्या कम देखियो नि किन ?
 वीरेन्द्रनगरमा बसोबास गर्ने अधिकांश मानिस बाहिरबाट जिल्लामा व्यापारको तथा जागिरको शिलशिलामा आएका छन् । वीरेन्द्रनगरका मानिस भने व्यवसाय, जागिर तथा पढाइको शिलशिलामा काठमाडौं लगायत अन्य जिल्लामा गएको हुँदा वीरेन्द्रनगरमा मतदाता नामावली कम देखिएको हो । अर्काे कुरा जो व्यक्ति जुनसुकै जिल्लामा भए पनि त्यही जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयमा गएर अद्यावधिक गराइ मतदान गर्न आफ्नै जिल्लामा आउन पाउँछन् । यो सूचनाको कमी भएर पनि कम देखिएको हो ।
मतदाता नामावली कार्य सफल बनाउन सर्वपक्षीय भेला कस्तो भइरहेको छ ?
 सर्वपक्षीय भेला केन्द्रीयस्तरबाट नै हुँदै आएको छ । जिल्ला जिल्लामा पनि सर्वपक्षीय भेला भइरहेका छन् । राजनीतिक दल, सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया गरेर कार्यक्रमलाई कसरी सफल बनाउने भन्ने बारेमा छलफल गरेर मात्र कार्यक्रम सुरु गर्छौ । सुर्खेतको सन्दर्भमा भन्ने हो भने छलफल कार्यक्रम सकिएको छ अब पुस १७ देखि माघ १७ गतेसम्म हामीले मतदाता नामावली संकलन सुरु गर्दछौं ।
कार्यालयलाई काम गर्दाको समस्या तथा चुनौती के के छन् ?
 कार्यालयलाई यो काम गर्नेबेलामा आइपर्ने समस्या र चुनौती भनेको त पहिलो काम गर्ने साधन नै नहुनु हो । अर्काे कुरा दुगर्म क्षेत्र तथा गाविसहरूमा गएर काम गर्नको लागि अलि गाह्रो नै छ । अनुगमन गर्नको लागि दुर्गम क्षेत्रहरूमा समय धेरै लाग्ने भएकाले कहिले काहीं समस्या हुन्छ ।
 अन्त्यमा मतदाता नामावली संकलन यो अन्तिम पटक हो । यो मौका अब फेरि–फेरि आउँदैन । त्यसैले यो अवसरलाई नगुमाएर आफ्नो गाविस तथा वडामा आएको मतदाता नामावली दर्ता स्थलमा आएर आफ्नो नाम, ठेगाना, बसाइँ–सराइँ, मृत्यु भएको भए सच्याउन र कसैको नाम हटाउनु परेमा दाबी विरोध समेत गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु । अर्काे कुरा यो कार्यक्रम हामी एउटा कार्यालयले मात्र गरेर सफल हुँदैन त्यसैले सबै राजनीतिक दलहरू, सरोकारवाला निकाय तथा सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगको अपेक्षा पनि गरेका
छौं । तोकिएको समयभित्रमा सबैलाई आफ्नो मतदान गर्ने अधिकारलाई आफै सुनिश्चित गनुस् भन्न चाहन्छु ।
प्रकाशित मितिः १४ पुष २०७३, बिहीबार ११:३८